Tag: sarety fiantsenana nilaozana | Martech Zone
Tag: sarety fiambenana nilaozana
Paikady 3 ho an'ny laharana Marketing amin'ny mailaka izay mampitombo ny tahan'ny fiovam-po
Alatsinainy Janoary 25, 2021 Alatsinainy Janoary 25, 2021 Douglas Karr
Raha nofaritana ho toy ny fantsona ny varotra miditra nataonao dia nofaritako ho toy ny fitoeram-bokatra ny marketing mailakao hisamborana ireo fitarika latsaka. Betsaka ny olona hitsidika ny tranokalanao ary hiara-hiasa aminao aza, saingy angamba tsy mbola fotoana tokony hiovam-po. Anecdotal fotsiny io, fa hilazalazako ny lasako manokana rehefa mikaroka sehatra na miantsena an-tserasera: Fividianana mialoha - Hodinihiko ny tranokala sy ny media sosialy hahitako izay azoko atao momba izany.
Sabotsy, Janoary 9, 2021 Sabotsy, Janoary 9, 2021 Douglas Karr
Tsy misy fisalasalana ny amin'ny lavitra ny Hubspot amin'ny maha CRM sy sehatra automatique marketing ary WordPress ho rafitra fitantanana votoaty. Satria plugin tsotra sy add-on izy, WooCommerce dia nitombo laza ho sehatra ecommerce hampiharina mora foana. Na dia namoaka ny CRM azy manokana aza ny WordPress, ny platform dia tsy ampy ny fahamatoran'i Hubspot noho ny fahafahany mitarika ny fizotrany amin'ny fahazoana sy ny fitazonana ny tetika ataon'ny fikambanana. Ny kopian'ny Hubspot mora vidy amin'ny